7 Days New Journalist Aye Thu Interviews Wyne Su - All Things Myanmar Burmese
Previous: « Once uponatime – Phwe Phwe, Su Kabyar and A Thin Cho
Next: Choosing A Mini Notebook Computer Without Tears »
Myanmar Blog » Asia Entertainment »7Days New Journalist Aye Thu Interviews Wyne Su
7 Days New Journalist Aye Thu Interviews Wyne Su
Myanmar singer: N Kai Ra
Myanmar singer N Kai Ra became noticed after her song “Khwint Phyushwedarling.com/blog
Couple of the day: Sai Sai and Wut Hmone
He is 30 and she is 21. But age difference isshwedarling.com/blog
Thazin to come to Korea in September
Myanmar actress and singer Thazin will be coming to Korea (Soeul) nextshwedarling.com/blog
7 Days New Journalist Aye Thu interviewed Myanmar actress and singer Wyne Su Khine Thein about her music album that was released recently. One of the questions that the journalist brought up was Wyne Su Khine Thein’s choice of fashion (she mentioned mini dresses). Read the following excerpt from the interview and look at her photos from various stage shows below: What do you think? (No Ratings Yet)
Wyne Su Khine Thein in flower dress
Do you think Hein Wai Yan should apologise to Wyne Su?
Wyne Su Khine Thein atabeach in Thailand
19 Responses to “7 Days New Journalist Aye Thu Interviews Wyne Su” sai sai 18+ @ June 21st, 2010 at 1:59 pm:
heinminwin @ June 21st, 2010 at 10:08 pm:
အားလုံးကို ခင်ပါတယ်..ကျွန်တော်လဲု စာဖတ်ပရီသတ်တစ်ဦးပါ
kokomg @ October 4th, 2010 at 7:50 pm:
မအေးသူစံ အမကိုလေးစားပါတယ် အမ မမှားနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ် တာဝန်တခုလုပ်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ် မေးတာကိုဖြေရမှာက သူ့ရဲ့တာဝန်ပါ ငါနာမည်ကြီးမင်းသမီးဆိုပြီး ရှင်းလင်းမှူ့ မပေးတာ မေးတာကိုရှင်းလင်းအောင်မဖြေနိုင်တာသုရဲ့တာဝန်ပါ စိတ်ဆိုးတိုင်းဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်သတင်းထောက်ဆိုတာဘာလို့ထားမှာလဲ သတင်းအမှန်ဆိုတာကောရှိနိုင်ပါမလား ဝေဖန်တဲ့သူတွေကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ ဒါကတော့သူတို့ကမမထက်ထက်ကိုချစ်ကြတာကို ကျွန်တော်လဲမထက်ထက်ရဲ့ပရိသက်တရောက်ပါ ဒါပေမဲ့သတင်းဆိုတာသတင်းပဲလို့သဘောထားရင် မမထက်ထက်ကိုတိုင်သတင်းတွေကိုဖြေပေးမယ်ဆိုရင်အားလုံးကသဘောကြမှာပါဘြာူဖစ်လို့လဲဆိုတော့မမကနာမည်ကြီးမင်းသမီးတယောက်လေ သတင်းတွေထွက်တာမဆန်းပါဘူးရှငိးပြနိုင်မယ်ဆိုရင်သတင်းထောက်တွေလောက်တော့သေးသေးလေးပါမမ ကျွန်တော်ကတော့နှစ်ယောက်စလုံးကိုအားပေးပါတယ် အားလုံးက ကို့တာဝန်နဲ့ကိုဆိုတော့ ကျေးဇူးပါပဲကျွန်တောလဲပရိတ်သတ်တရောက်ပါအားလုံးသင့်မြတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလျှက် ကိုကိုမောင် ခတ္တဘန်ကောက်
မိုး @ June 25th, 2011 at 7:20 am:
မမ ၀ိုင်းစု ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
မိုး @ June 25th, 2011 at 7:26 am:
မမရေ သူ့ခေတ်သူ့အခါ ၀တ်တာကတော့ ကိစမရှိပါဘူး
့ဒါပေမဲ့ ဒီထက်နဲနဲ ပိုရှည်တာ ကြည့်ကောင်းမလားလို့
wintwahsophuu @ July 6th, 2011 at 2:17 am:
apple @ July 14th, 2011 at 2:53 pm:
zun @ September 26th, 2011 at 9:14 am:
၀ိုင်းစုရေ…မင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လေးရှိနေတော့ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်…ဒါပေမယ့် ကိုယ်နဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးလို့ယူဆတဲ့ဝတ်စုံလေးတွေကိုပဲ များများဝတ်ပါလို့….
war war @ October 15th, 2011 at 3:36 am:
၀ိုင်းစု မြန်မာမိန်ကလေးတယောက်အနေနဲ့ ဒီလိုဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေရှောင်သင့်ပါတယ် ၀ိုင်းစုနဲ့လိုက်ပါတယ် ဒါပေ့မဲ့ အရမ်းပေါ်လွန်းတော့ရိုင်းတာပေါ့
komaung @ October 15th, 2011 at 7:02 pm:
Moon @ November 5th, 2011 at 4:11 pm:
the clothes are really nice to see with u.it too cut and u 2;;;
potato @ December 9th, 2011 at 8:32 am:
kay thi nann @ March 21st, 2012 at 9:19 am:
kay thi nann @ March 21st, 2012 at 9:21 am:
Phyu Lay @ November 13th, 2012 at 7:02 am:
kay thi nann @ December 27th, 2012 at 3:51 pm:
၀ိုင်းစုရေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးထားပါနော် မြန်မာမိန်းကလေးဆိုတာတန်ဖိုးရှိအောင်နေတက်ရတယ်
yinminthwe05 @ February 17th, 2013 at 3:06 pm:
Mr. Wisdm @ March 16th, 2013 at 8:46 am:
It’s up2her. not up2U.
kk?h @ April 10th, 2013 at 6:13 pm:
ဒီလိုဝတ်ပြတော့ တော် တော့် ချင်တယ်